Bursaalax, Puntland: Waxaan ballan qaadayaa in ilmo kasta oo ku nool Puntland uu lacag la'aan ku helo waxbarashada asaasiga ah
Musharaxa madaxtinimada Puntland mudane Nuradiin Aadan Diiriye ayaa booqasho aan la sii shaacin wuxuu ku tagay degaanka Bursaalax iyo Riig Oomane oo ka dirsan Gobolka Mudug shalay oo taariikhdu ahayd 23/11/08. Markii uu musharaxu soo gaaray Bursaalax ayaa waxaa halkaas ku diyaar ahaa dadweyne farabadan oo ayagu subaxnimadii hore isu soo baxay isuna diyaariyey soo dhawaynta musharaxa iyo wafdigiisa. Soo dhawaynta oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa hor kacayey maamulka degaankaas, waxaana halkaasi hadal soo dhawayn ah ka jeediyey Gudoomiyaha Beesha Nuur Cabdi Cali.
Waxaa sidoo kale munaasabadaas ka hadlay Nabadoon Cabdil Cabdille Boos iyo Nabadoon Cabdi Xasan Qalaad oo musharaxa uga mahadceliyey booqashadiisa. Musharaxa ayaa asguna dhankiisa ugu mahadnaqay reer Bursaalax sida sharafta leh ee ay asaga iyo wafdigiisa u soo dhaweeyeen
Musharaxu wuxuu ugu horeyn booqday Dowlada Hoose ee Bursaalax waxaana uu halkaas hadal kooban uu uga jeediyey maamulka mgaalada iyo dadweynaha. , wuxuuna warbixin ka bixiyey barnaamijkiisa ku aadan badbaadinta Puntland, wuxuuna ka codsaday inay ku taageeraan ololihiisa isla markaasna loo guntado sidii maanta Puntland looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka balaaran ee ka jira.
Intii uu ku sugnaa musharaxu Bursaalax waxaa u suurtagashay in uu booqdo Dugsiga Hoose Dhexe ee Cirro, Bursaalax halkaas ay wax ku bartaan laguna quudiyo in ka badan 800 oo ilmood. Wuxuu kaloo soo indha-indheeyey meesha uu marayo dhismaha dugsiga sare ee Cirro, Bursaalax. Dugsiga sare ee Cirro, Bursaalax ayaa waxaa maalgalinayey Jaaliyadda Qurbaha ee Bursaalax. Musharaxa ayaa sheegay in waxbarashadu ay tahay furaha nolosha isla markaasna marka uu ku guulaysto hogaanka Puntland uu siin doono waxbarashada asaasiga ah oo lacag la'aan ah ilmo kasta oo ku nool Puntland.
Musharaxu wuxuu ku booriyey masuuliyiinta gacanta ku hayey howsha dhismaha in la dar dar geliyo howsha wuxuunau sheegay in mashruucaani wax wayn ku soo kordhin doono mustaqbalka dadka reer Bursaalax iyo ubadkoodaba. Guud ahaan Mudane Nuuradiin oo maalmahan booqasho ku marayey Gobolka Mudug ayaa wuxuu kala kulmay dadweynaha reer Mudug soo dhawayn aad u wayn meel kasta uu tago, waxaana si weyn loo dareemayaa inuu ku guulaystay taageerada dadweynaha iyo waliba tan wakiilada Mudug uga soo gala baarlamaanka Puntland.